Yini inhloso yegrey, emnyama nomhlophe? - Mytika Speak
Ikhaya / Ama-Rays / Yini inhloso yegrey, emnyama nomhlophe?
Inhloso yegrey, emnyama nomhlophe ukudala amandla angenamkhawulo. Uma uhlanganisa amandla amnyama namhlophe, umphumela uba umthunzi olinganiselayo ompunga.
Okumhlophe okumsulwa nokumhlophe okumsulwa nakho extreme okwenza kube lula ngabo ukuhlangana ngokweqile kwabo okuphambene.
Okumhlophe kungabonakala njenge Kakhulu Ngokomoya onqamula ne- Okudlulele ngokomzimba (mnyama).
Okumnyama yi-Extreme Physical ephambana ne-Extreme Spiritual (white).
Ngalokhu kuhamba okuqhubekayo, amandla abiwa phakathi komnyama nomhlophe. Isenzo sokuphambanisa sihluza amandla womabili ashubile akha umthunzi olinganiselayo ompunga.
Umfanekiso ongezansi ukhombisa ukuthi omnyama nomhlophe bahlangana kanjani kepha bangafinyelela kubhalansi ngaphakathi kwempunga.
Abafundi bami bayanwebeka ebumnyameni
njengoba bezama ngentshiseko ukudla ukukhanya
Ukwesaba ubumpumputhe ngemuva kokubuka ilanga kubaphazamisa laba bafundi
njengoba befuna ubumnyama
Izinkophe zami zinginikeza isihlangu esijulile
njengoba zivula futhi vala amehlo ami
Kwethula ngenketho empunga
abanye bangabona njengokubona
Amathegiblack ukuqonda grey izinkondlo imisebe ingokomoya white